Oovimba abagqogqayo - Iphepha lesi-2 kwele-6
I-Ripple vs. I-SEC Lawsuit kwi-Track engcono kunokuba bekucingelwa: Coinbase Boss
Ukuhlaziywa: 27 October 2021
Ukuphawula malunga nemfazwe eqhubekayo yomthetho phakathi kweRipple Labs kunye ne-US Securities and Exchange Commission, i-CEO yeCoinbase uBrian Armstrong yaphawula ukuba ityala libonakala lihamba ngendlela engcono kunokuba kulindelwe.
Ecaphula inqaku leForbes elinesihloko "Ukuvukelwa kwe-crypto kwi-SEC akubonanga kuza," Umphathi weCoinbase ubhale kuTwitter ngoMvulo ukuba:
"Ityala le-Ripple libonakala lihamba ngcono kunokuba bekulindelwe. Okwangoku, i-SEC iyaqonda ukuba ukuhlaselwa kwe-crypto akuthandeki kwezopolitiko (kuba kulimaza abathengi).
Umnqa kukuba abantu ekucingelwa ukuba bayabakhusela ngabo abahlaselayo.”
Ripples I-CEO uBrad Garlinghouse wenze ingxelo efanayo malunga neKomishoni kwixesha elidlulileyo. U-Garlinghouse waphawula ukuba i-watchdog ayiphumelelanga ukuphumeza isakhelo esicacileyo se-crypto, yongeza ukuba: "Endaweni yokusebenza kunye neshishini, i-SEC isebenzisa iintlanganiso zabo kunye neenkampani njengesizukulwana esikhokelayo kwizenzo zabo zokunyanzelisa."
Ukulandela i-tweet ye-Armstrong, ababukeli abaninzi be-Twitter bayithatha njengomqondiso wokuba i-Coinbase inokubuyisela i-XRP ngokukhawuleza, ababekholelwa ukuba ingabangela ipompo yexabiso. Nangona kunjalo, abanye bahlala bengathandabuzeki kwaye baxela ukuba i-Coinbase ayiyi kuphinda i-XRP ide iphele isigwebo.
I-Coinbase isuse i-XRP kuluhlu lwayo olunikezwayo ngoJanuwari emva kwe-SEC ye-SEC ngokumelene ne-Ripple Labs kunye nabaphathi bayo, kuquka i-Garlinghouse kunye nomsunguli we-Chris Larsen.
Amanqanaba aphambili eRipple ukuba abukele-Okthobha 27
I-XRP ifike phantsi koxinzelelo olukhulu lwe-bearish njengoko isilela, kwakhona, ukuphuka ngaphezulu komgangatho wam wokuhla. I-cryptocurrency yesixhenxe ngobukhulu ihlupheke i-bearish spiral ukuya kwi-0.9500 yenkxaso kwithuba elidlulileyo kodwa yabona ukuphindaphinda ngokukhawuleza ukuya kwindawo ye-$ 1.0220.
Nge-bearish sentiment yangoku ephazamisa imarike ebanzi, ndilindele ukuba i-XRP iphinde iphinde ihlawule i-$ 1.0000 inkxaso yengqondo kwakhona, ekufuneka inqume apho ixabiso liya khona ngokulandelayo. Eyona njongo iphambili ye-bullish ye-cryptocurrency ngoku iphumle kwinqanaba le-1.1000 yeedola.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 1.1500, $ 1.2000, kunye ne-1.2500, kwaye amanqanaba ethu enkxaso ayi- $ 1.1000, $ 1.0500, kunye ne- $ 1.0000.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.48 zezigidi
Uqoqosho lweRiple capitalisation: $ 47.9 billion
Ukulawula kweRipple: 1.93%
Inqanaba lentengiso: #7
tags Cryptocurrency, iindaba, Ripples, sec, Uhlalutyo lobuGcisa, XRP
Ripple vs. SEC: Ripple Argues Against SEC's Expert Discovery Extension Isicelo, Uyakhala uCalucalulo
Ukuhlaziywa: 20 October 2021
Kuphuhliso lwamva nje kwiLebhu eQhubekayo yeLebhu ngokuchasene nesigwebo se-SEC, Ripples Ugcwalise inkcaso kwileta ye-SEC ecela ukwandiswa kweenyanga ezimbini kwinkundla-eyalela ukuba kufumaneke umhla wokugqibela wokufunyanwa kwengcali, oya kutsala ityala liye kwi-2022.
Ummangalelwa uqaphele ukuba ngelixa bekuvunyelwene ngomhla wokugqibela weengxelo zokuchaswa kwengcali ukuya ku-Novemba ngo-12, ulwandiso ekufumanekeni kwengcali akufuneki ludlule kuDisemba 10. Inkampani ye-blockchain yaqinisekisa ukuba ukwandisa ukufunyanwa kwengcali ukuya kuJanuwari 2022 kuya “Ikhethe ngokungeyomfuneko” kwaye uqhubeke "Qandisa" imakethi yeXRP eMelika.
I-XRP iye yafumana ubunzima ekunyuseni amaxabiso ngenxa yesimangalo esiqhubekayo phakathi kwemiqobo emikhulu evela kwezinye iicryptos. URipple ucebise ukuba inkundla ithathele ingqalelo ukuba ukuvumela olunye utshintsho kwesi shedyuli kweli nqanaba kuya kubachaphazela abatyholwa.
Inkampani ye-blockchain icacisile ukuba yonke imihla ityala liba lusuku lwamathuba alahlekileyo njengoko iimarike zalo zaseMelika zihlala zingumkhenkce kwaye “Unocalucalulo” kwishishini likaRipple. Iingxoxo zommangalelwa zifundeka ngolu hlobo:
"Ibango le-SEC lokuba ulwandiso lwayo olucetywayo" alunakucalucalula abatyholwa nangayiphi na indlela ebonakalayo "lukutyeshele okucacileyo. Ukuma kwalo mthetho kulimaze kakhulu ukuthengisa kweXRP, ngakumbi eMelika. Imveliso yokuhlawulwa komda weRipple ixhomekeke kwiimarike zeXRP ezingamanzi. I-SEC iyazi kakuhle ukuba zingaphelanga iintsuku ezimbalwa ifake isuti yayo, phantse i-20 yotshintshiselwano iye yalurhoxisa okanye yamisa urhwebo lwe-XRP e-United States, kwaye uninzi luye lwalandela loo nto, lonakalisa kakhulu intengiso ye-XRP. ”
Amanqanaba aphambili eRipple ukuba abukele-Okthobha 20
Njengoko ityala lirhuqa, i-XRP iye yahlala ingakwazi ukutyala unyawo oluqinileyo ngaphezulu komgca we- $ 1.1500 ukusukela ngoSeptemba. Endaweni yoko, i-cryptocurrency yesithandathu ngobukhulu iye yathumela ukuphakama okuphantsi koolwesibini ngokulandelelana ukuya phezulu.
Ngokunye ukuseta okuseta ukuba kwenzeke kungekudala, Iinkunzi zeXRP kufuneka zinyanzelise ikhefu ngaphezulu kwesithintelo se- $ 1.1500 kunye nexesha lethu leentsuku ezilishumi ukuze siyeke ukudityaniswa ixesha elide kwindawo ejikeleze i- $ 1.1000- $ 1.0500 zone pivot.
Silindele ukubona ukuphinda-phinda kwe- $ 1.1500 yokuxhathisa kwiintsuku ezizayo phakathi kokuhlaselwa kwamaza okuthengisa kwimarike yeBitcoin.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.55 zezigidi
Uqoqosho lweRiple capitalisation: $ 52.3 billion
Ukulawula kweRipple: 2.05%
Inqanaba lentengiso: #6
tags Cryptocurrency, iindaba, Ripples, Uhlalutyo lobuGcisa, XRP
Amahlakani eRipple kunye neNelnet yokudala iNgxowa mali yoTyalo-mali kwiiprojekthi zeCarbon-Reductive Projekthi
Ukuhlaziywa: 13 October 2021
Elinye lamashishini aphezulu blockchain kunye nezisombululo zedijithali, I-Ripple (XRP)Kutshanje kubhengezwe ubambiswano neNelnet yaMandla aVuselelekayo ngotyalo-mali oluhlanganyelweyo lwe- $ 44 yezigidi. Upapasho olusemthethweni lwaphawula ukuba iRipple ibonelele ngesabelo esiphezulu kutyalo mali.
Utyalo-mali luza kuxhasa ngemali iiprojekthi zamandla elanga kulo lonke elaseMelika njengomboniso wenkxaso yotshintsho kwikamva lezamandla nelicocekileyo.
NgokukaNelnet, iiprojekthi zelanga ezixhaswa ngemali yiRipple Nelnet Renewable Energy Fund ziya kulungisa ngaphezulu kwe-1.5 yezigidi zeetoni zecarbon dioxide ngaphezulu kweminyaka engama-35.
URipple wenza ubudlelwane obuninzi ngo-2021 ukukhuthaza ukuyilwa kwekamva elingathathi hlangothi kwikhabhoni yezemali yehlabathi. Kwi-2020, inkampani ye-blockchain isebenzisana neWebhu yezaMandla kunye neRocky Mountain Institute ukuya "Decarbonize" Incwadi yeXRP.
Ukunika ingxelo malunga nophuhliso olutsha, iNtloko yeNtlalontle kwi-Ripple Ken Weber yathi:
“Ukuqinisekisa ikamva lamandla acocekileyo yeyona nto iphambili kuwo onke amashishini, hayi ukuqhubela phambili ukukhula koqoqosho kwixa elizayo kodwa nokuqinisekisa umhlaba ozinzileyo. Njengoko ukwamkelwa kwee-cryptocurrensets kunye ne-blockchain kuyaqhubeka nokukhula, kuyacaca ukuba itekhnoloji iya kuxhasa iinkqubo zethu zexesha elizayo zezemali. Siyavuya ukusebenza no-Nelnet njengoko silandela ukuzibophelela kwethu ekunciphiseni ubume bekhabhoni beenkonzo zezezimali kwihlabathi liphela kunye nokwenza izithembiso zecarbon-negative cryptocurrency.
Amanqanaba aphambili eRipple ukuba abukele-Okthobha 13
I-XRP ibuyile kwisitishi esinyukayo seeveki ezintathu kunye ne- $ 1.1000- $ 1.0500 zone ye-pivot, njengoko intengiso ebanzi irekhodisha ukulungiswa okukhulu ukusukela ekuqhubeni kwenkunzi yenkomo.
I-cryptocurrency yesithandathu ngobukhulu igcina imeko yokuziphatha engaphezulu kwe-1.0500 yeepivot line, ngaphandle kwemizamo yeebhere yokunyusa amaxabiso asezantsi. Oko kwathethi, silindele ukuba i-XRP ibuyise kwakhona ukuma ngaphezulu kwe- $ 1.1000 yenqanaba lepivot kwikota ekufutshane, kulandele ukuqhubeka okuqhubekekayo ukuya phezulu kwisitishi sethu esinyukayo kwindawo eyi- $ 1.1500.
Ikhefu elingaphezulu kweli nqanaba kufuneka limise ukubuyela kwimeko yesiqhelo kwi-1.3000 yeedola kwiintsuku neeveki ezizayo. Ngeemeko zentengiso kumanqanaba angathathi hlangothi, olu qikelelo lunokuqaliswa kungekudala.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 1.1000, $ 1.1500, kunye ne-1.2000, kwaye amanqanaba ethu enkxaso ayi- $ 1.0500, $ 1.0000, kunye ne- $ 0.9500.
Uqoqosho lweRiple capitalisation: $ 50.9 billion
Ukulawula kweRipple: 2.24%
I-Ripple vs. i-SEC yecala: Abanini be-XRP ngoku banokuNcedisa kwiiNdibano zoMthetho
Ukuhlaziywa: 6 October 2021
Ripples IiLabs zibhalise enye i-snack win kwityala layo eliqhubekayo kunye ne-US Securities and Exchange Commission (i-SEC) emva kokuba iJaji yeSithili sase-US u-Analisa Torres enike iwonga “Amici curiae” kuluntu lweXRP kulomthetho.
Igqwetha elaziwayo le-XRP kunye negqwetha kwisiqalo se-blockchain uJohn Deaton naye ufumene iwonga elikhethekileyo kwisigwebo. Oko kwathethi, abaphathi beDeaton kunye neXRP banokusebenza njenge "Abahlobo benkundla," ukubenza bakwazi ukunceda inkundla ngamagqwetha omthetho malunga netyala.
Ujaji Torres uqaphele ukuba olu hlobo loncedo luya kuza ngexesha lokuhamba kwesindululo. Nangona kunjalo, lo myalelo ucacisa ukuba inkundla igcina amandla ayo okucela okanye ukwala ezinye izicelo.
Elinye igqwetha elidumileyo elibandakanyekayo kwityala, uJames Filan, uluchaze olu phuhliso lutsha njenge “Impumelelo enkulu” kuluntu lweXRP.
Ngaphandle kwesimo esikhethekileyo, isindululo sabanini beXRP sokungenelela kwimeko siyaliwe. Inkundla iphinde yacacisa ukuba ukugcina ulungelelwaniso phakathi kwabatyali mali beRipple kunye namaqela, uluntu alunakho ukubonisa amangqina okanye ubungqina obusebenzayo.
Umyalelo wenkundla wamva nje uza emva kokugxekwa kweejaji ngokubonisa icala kwi-SEC. Kananjalo, uluntu luziva lukhohlisiwe ngamaxabiso athatha izigqibo zenkundla njengoko iKhomishini iqhubekile nokufaka izindululo ezivumela ukuba ibambe ulwazi olubalulekileyo.
Amanqanaba aphambili eRipple ukuba abukele-Okthobha 6
Ukulandela i-8% ye-rally ye-bullish ngaphezulu kweeyure ezingama-48 ezidlulileyo, i-XRP iye yabuya umva ingezantsi kwe- $ 1.0500 yenkxaso phakathi kokunqongophala kokuqhubekeka kokuqhubela phambili ngaphezulu kweempawu ezibaluleke kakhulu ze- $ 1.1000. Oko kwathethi, i-cryptocurrency yesithandathu ngobukhulu isala ithintelwe kwisiphelo esiphezulu sejelo lethu elinyukayo.
Nangona kunjalo, silindele ukuba nakuphi na ukubuyela umva kwe-bearish ukuze kuthintelwe yi- $ 1.0000 yenkxaso ebalulekileyo. Nangona kunjalo, iibhere ngoku azinawo amandla okutyhala ixabiso kwinkxaso ye- $ 1 endaweni yoko, silindele ukubona ukubuyiswa okuhle kwindawo eyi- $ 1.1000- $ 1.0500 kwindawo yeepivot kwiiyure ezizayo.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 1.0500, $ 1.1000, kunye ne-1.1500, kwaye amanqanaba ethu enkxaso ayi- $ 1.0000, $ 0.9500, kunye ne- $ 0.9275.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.22 zezigidi
Uqoqosho lweRiple capitalisation: $ 48.9 billion
Ukulawula kweRipple: 2.2%
Ripple vs. SEC Ummeli-mthetho: Ripple Tackles SEC's Ukuphindaphinda "Amaxwebhu aLungelo" Ingxabano
Kuphuhliso lwamva nje kwifayile ye- Ripples Ngokumalunga ne-SEC, eyokuqala ityikitye ileta ephendula le ncwadana imfutshane malunga namaxwebhu atyholwa ngelungelo, athe i-SEC yalilungisa okanye yalibamba.
Ummangalelwa uphikisana nokuphindaphinda kweKhomishini “Nelungelo” Ukuma kokuthintela ukufunyanwa kunye nokuphononongwa kwamaxwebhu aphunyukayo kunye nokuphendula kwimeko.
Ityala libhale enye yezona zinto zibaluleke kakhulu zolwazi olutyhilwe nguRipple, oluqulathe uhlalutyo lwommangali lwe2018 XRP eqinisekisa ukuba iinguqulelo eziphindiweyo ze-SEC zempikiswano enelungelo azinamanzi. Ummangalelwa utyhile ukuba icandelo le-SEC leengxelo zomthetho zeXRP zenza indlela yazo "Abantu abathile kwi-SEC," usuku ngaphambi kwengxoxo ye-Hinman ye-2018.
I-Ripple ikwanyelisile amaxwebhu elungelo lokungena emzimbeni, ngakumbi uhlalutyo lomthetho lwe-XRP phantsi kwamabango amathathu. Ukhuselo lwalahla igqwetha kunye nomthengi ilungelo lempikiswano yi-SEC, besithi amaxwebhu ekubhekiswa kuwo ayingamaxwebhu asebenzayo kwaye ngenxa yoko awanalungelo lokusebenza nelungelo.
Ummangalelwa wongeze ukuba ifayile yoqobo yophando ye-SEC ibingaqulathanga la maxwebhu, esithi iKhomishini ifuna ukumisela la maxwebhu. U-Ripple uqaphele ukuba amaxwebhu ophando agutyungelwe lilogi yelungelo le-SEC, elingafuneki ukuba ungene kwakhona.
Amanqanaba aphambili eRipple aBonwayo-Septemba 29
I-XRP iyaqhubeka nokutsala nzima ngokufumana nayiphi na into ehamba phambili njengendawo yesithandathu ngobukhulu yokuthengisa kwi-cryptocurrency ngaphakathi kwidesika ethe tyaba. Le patheni yokurhweba iza phakathi kokunciphisa ngokukhawuleza umthamo wentengiso. Siyakholelwa ukuba umfutho wokurhweba okuthe tyaba orekhodwe kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo uza ngenxa yomthetho osayilwayo weziseko zophuhliso, obangele umbono obeka umngcipheko kubarhwebi, echaza ukwehla kwevolumu yorhwebo.
Nokuba kunjalo, silindele ukuba amaxabiso e-bearish ashukunyiswe yindawo yenkxaso ye- $ 0.9000. Kwelinye icala, ikhefu elingaphezulu kokuxhathisa kwe- $ 0.9500 kufuneka ibuyise ukuzithemba okuqinisekileyo kubarhwebi.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 0.9500, $ 1.0000, kunye ne-1.0500, kwaye amanqanaba ethu enkxaso ayi- $ 0.9000, $ 0.8800, kunye ne- $ 0.8500.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.88 zezigidi
Uqoqosho lweRiple capitalisation: $ 43.3 billion
Ukulawula kweRipple: 2.3%
Ripple vs SEC: UMgwebi uyala Isindululo sikaRipple sokufikelela kwi-SEC yokuThengisa iMbali yeMbali
Ukuhlaziywa: 22 Septemba 2021
Umantyi uJaji uSara Netburn usikhabile isicelo sikaRipple Labs sokunyanzela i-US Securities and Exchange Commission (i-SEC) ukuba inike iirekhodi zabasebenzi be-crypto transaction ukungqina ukuba iKhomishini itshintshe isigwebo sayo se-XRP njengokhuseleko.
Amagqwetha ommangalelwa azama ukungqina ukuba abanye abasebenzi be-SEC bathengisa i-XRP, nto leyo eya kubonisa ukuba iarhente ayibonanga i-XRP njengokhuseleko ngaphambili.
Nangona kunjalo, uJaji Netburn wayichasa le nto ngenxa yezizathu ezininzi. Okokuqala, ukuqinisekisile ukubaluleka kwengxoxo yeKhomishini yoKhuseleko kunye noTshintshiselwano yokuba "Inkqubo yesigqibo esandulelayo ayibandakanyi nakuphi na ukumiselwa nguMcebisi ngeeNqobo eziseSikweni ukuba urhwebo luyahambelana nemithetho yezokhuseleko."
Okwesibini, wacacisa ukuba bekukho ukunqongophala kwezizathu ezisemthethweni zokuvuma isicelo sommangalelwa kuthathelwa ingqalelo ukuba umthetho wobumbano ukhusela amalungelo abucala abasebenzi be-SEC njengabemi base-US. Ujaji Netburn uqaphele ukuba:
"Ngokubhekisele kwizatifikethi zonyaka ezifunwa ngabatyholwa, iCongress ikuthintele ukuxelwa kolwazi lwezezimali ngemigaqo nemigaqo yabucala ukuze kugcinwe ubumfihlo babasebenzi bakarhulumente."
Okokugqibela, ucacisile ukuba i-SEC yayingenamgaqo-nkqubo wezorhwebo ngokubhekisele kwiiasethi zedijithali ngexesha lomdla wokumangalelwa, abaqeshi bayo abaphulanga mthetho nokuba bathengise ngeemali ezixabisekileyo.
Amanqanaba aphambili eRipple aBonwayo-Septemba 20
I-Ripple (XRP) Ufumene ingozi eyonzakalisayo kwinqanaba leedola le-1.0500 ngeCawa phakathi kwengozi eyabangelwa lishishini. Oku kwehla kuzise i-XRP kufutshane nenqanaba leedola i-0.8500, iiveki ezintandathu ezisezantsi.
Oko kwathethi, i-cryptocurrency yesithandathu ngobukhulu ngoku ibuyisela isithintelo se- $ 0.9500 njengeebhere ziphelelwa ngumphunga. I-4-yeyure yethu ye-MACD ibonisa ukuba umfutho wentengiso uguquka kancinci, njengoko iinkunzi zeenkomo zijolise kwinqaku le- $ 1.0500. Ukwehla okuthe kratya kwixabiso elikhoyo kufuneka kuphendulwe yi- $ 0.9000 yenani elijikelezileyo.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 0.9500, $ 1.0000, kunye ne-1.0500, kwaye amanqanaba ethu enkxaso ayi- $ 0.9275, $ 0.9000, kunye ne- $ 0.8800.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.87 zezigidi
Uqoqosho lweRiple capitalisation: $ 43.6 billion
Ukulawula kweRipple: 2.34%
Ripple ukuba ube "yiNgqekembe kaRhulumente" emva kweSechu yetyala: Andrew Lokenauth
Ukuhlaziywa: 15 Septemba 2021
Usekela-Mongameli-iNtloko yeNgxelo yezeMali kwi-Amalgamated Bank, u-Andrew Lokenauth uthi I-Ripple (XRP) ingathatha indima ye “Imali Yoluntu” nje ukuba iRipple Labs iqukumbele umrhumo wayo wezomthetho kunye neKhomishini yoKhuseleko kunye nokuTshintshiselana yase-US (i-SEC).
U-Lokenauth uzibandakanye nezimvo zikawonkewonke kwii-cryptocurrensets zeminyaka kwaye ubambe izikhundla ezibalulekileyo eGoldman Sachs, kwibhanki ye-AIG nakwamanye amaziko aphezulu ezemali. Ingcali yeGoldman Sachs iqaphele ukuba:
"I-Ripple iya kuphinda ichaze iintlawulo ezenziwa kwi-Intanethi, kwaye ndiyakholelwa ukuba iRipple XRP izakubakho nge-IPO kwaye iye esidlangalaleni yakuba isonjululwe ityala layo."
Lokenauth wongeze ukuba “Ezona zibonelelo ziphambili zokusebenzisa umthetho weRipple kukukhawulezisa kunye nokunciphisa umngcipheko. IXRP ithatha indawo ye-SWIFT, ebiza kakhulu kwaye icothe. ”
Isigqeba seAmalgamated Bank sichaze ukuba i-SWIFT, inkqubo yeminyaka engama-50 yokuhlawula amatyala ebhankini, ilawula ukuhamba kwemali kunqumla imida. Iimali ze-Fiat zithatha iintsuku ezi-3 ukuya kwezi-5 ukuhamba ukusuka kwelinye ilizwe ukuya kwelinye nge-SWIFT kwaye uhlawule imali eninzi yokutshintshela. I-Ripple, kwelinye icala, inokuququzelela ukuthengiselana kwemida ngemizuzwana emi-5 kwaye ngexabiso eliphantsi.
Kudliwanondlebe ne-Cryptopolitan.com, uLokenauth ucacisile ukuba umboneleli wesisombululo sentlawulo usebenzisa iprothokholi ye-Ripple kwaye unokuhambisa inkqubo ekhawulezileyo netshiphu kwintlawulo yebhanki. Watsho ukuba i-XRP likamva lokuhlawulwa kwemida.
Amanqanaba aphambili eRipple aBonwayo-Septemba 15
I-XRPUSD iphinde yafumana amandla afanelekileyo okuphucula njengoko amaxabiso esokola ukukala umqobo we- $ 1.1000. Nangona kunjalo, i-cryptocurrency yesithandathu ngobukhulu ichithe iiyure zokugqibela ezili-15 isilwa naloo mgca ulilize.
Oko kwathethi, i-XRP kufuneka irekhode isitshixo esinyukayo ngaphezulu kwenqanaba le- $ 1.1000, apho ukudibana kwezinto zobuchwephesha, kubandakanya umgca wokumelana nengqondo, i-50-day SMA, kunye nenqanaba le-pivot. Ukusilela ukucoca lo mqobo kungathintela i-cryptocurrency kuluhlu lokudibanisa phakathi kwe- $ 1.1000 kunye ne- $ 1.0500.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.14 zezigidi
Uqoqosho lweRiple capitalisation: $ 50.8 billion
Ukulawula kweRipple: 2.38%
I-SEC vs.Ripple: Ukufumanisa okutsha kungasigqiba isigqibo
Ukuhlaziywa: 10 Septemba 2021
Uphuhliso olutsha kwi-Ripple eqhubekayo vs i-SEC Lawsuit ivele kwaye ingakhokelela kwisigwebo sokugqibela kwimeko. Isicelo sommangalelwa sokuqala sokwamkelwa (esingu-99) kwi-US Securities and Exchange Commission, eqhotyoshelwe kwifayile yenkundla yamva nje, ityhila ukuba lolona lwazi lubalulekileyo kwezomthetho.
Olu xwebhu luveze ukuba iKhomishini ayizange yazise naliphi na iqela lesithathu ukuba ithathe i-XRP njengokhuseleko kude kube kuvele isimangalo. Olu lwazi ngoku luye lwamkelwa ngokusemthethweni kwimeko. Impendulo ye-SEC kwisicelo sikaRipple sokwamkelwa uNombolo 99 iqaphele ukuba:
“Ngokuxhomekeke kuzo zonke ezi nkcaso zingasentla, iKhomishini iyavuma ukuba phambi kokufakwa kwetyala, abanye abantu babuza malunga nenqanaba le-XRP elisemthethweni. Nangona kunjalo, le Khomishini khange ichaze uluvo ngenye indlela okanye enye ukuphendula. ”
Ukwamkelwa okutsha kwe-SEC kuphikisa ukubekwa kukaHinman
Ukwamkelwa kweliso elibukhali kuphikisana kakhulu nokubekwa kukaMlawuli we-SEC owayengumbhali uWilliam Hinman apho wangqina khona, phantsi kwesifungo, ukucebisa iRipple Labs ukuba iyeke ukuthengisa i-XRP njengoko uMlawuli eyithathela ingqalelo njengokhuseleko.
Owayesakuba ngumphathi we-SEC wayesele ekwindawo eqinileyo ngokuqikelela ngezenzo zakhe ezikhohlakeleyo ngokubhekisele kwintetho ka-2018. Ngokufunyanwa kwamvanje, uHinman angalahlekelwa ngaphezulu kwe-SEC ngesigwebo sokugqibela.
Inqaku elibalulekileyo livele kutshanje, lityhila ulwazi ngokuchasene noHinman malunga nentetho enempikiswano ye2018. Ukupapashwa kubanga ukuba izimvo zikaWilliam Hinman malunga ne-Ethereum ngexesha lentetho ye-2018 zabalwa kwaye zaba yenye yezona zinto ziphambili emva kwesibini ngobukhulu be-cryptocurrency ye-600% ukuya kuthi ga ngoku.
Nge-Agasti, ngelixa ityala labona inkundla isinika isiVumelwano sokuTywina kwimiba yomibini ye-Slack kunye ne-DPP, ababukeli abaninzi bakhathazeka malunga nokugwetywa kweendawo zikaHinman. Ukuqikelelwa kuqhutywa nge-amok, abanye besithi ulwazi olutywiniweyo luqulathe ubungqina ngokuchasene noHinman wokucwangcisa ukunyuka kwamaxabiso. Abanye batyhola ukuba owayesakuba nguMlawuli we-SEC watyelela amagosa aphezulu e-Ethereum Foundation kunye nabathathi-nxaxheba babucala, ebaqinisekisa ukuba batyale imali kwi-ETH ngaphambi kwentetho.
Ripple vs SEC: Ukugqabhuka kugxeka iiNtshukumo eziNyanzelayo ze-SEC
Ukuhlaziywa: 8 Septemba 2021
I-Ripple (XRP) Ugcwalise impendulo kwi-SEC's Motion enyanzelekileyo yokufumanisa ukurekhodwa kweentlanganiso zangaphakathi zikaRipple zokurekhodwa okubonakalayo. Ngelixa ummangalelwa eqaphela ukuba idatha enyanzelisiweyo ayenziwanga kwimveliso kodwa waphikisa ukuba i-SEC's Motion to Compel is “Babengakulungelanga Ukuzimisela.”
Inkampani yesisombululo sokuhlawulwa kwemida yomda iphikisana neKhomishini ngokugcwalisa ezinye izindululo zokunyanzelisa njengoko isigaba sokufumanisa inyani sidlulile. I-Ripple ikwagxeka i-SEC Motion yokunyanzela ukufunyanwa, ephawula ukuba yayiyi "Ukuziqhelanisa nokucinga okungalunganga malunga nomba ongakhange ulungele ukugwetywa."
Ummangalelwa uqaphele ukuba ummangali ebenokukhetha ukudibana ngasese ukuba unemibuzo eyongezelelweyo malunga nokufunyanwa ngokurekhodwa komsindo nokubonakalayo endaweni yokufayilisha "Ayisebenzi" intshukumo. U-Ripple uqaphele ukuba iyakholelwa ukuba inkundla kufuneka iyikhanyele i-SEC "Moot" isindululo, ngenxa yokuba kungekho zicelo zingekagqitywa zokurekhodwa okwangoku kwimpikiswano. Kwakhona, ummangalelwa wabhenela kwinkundla ukuba imise izicelo ezizayo ze-SEC zokuqhubeka nokurekhoda.
Inkampani ehlawulelayo iphikisana nenkcazo engacacanga yearhente "Amaxwebhu," apho ummanqali wasebenzisa ukumangalela ummangalelwa ngokungaphumeleli ukufumana idatha ngokudibana kunye nokwenza. U-Ripple wongeze ukuba inkcazo ye-SEC yamaxwebhu iyinto “Kubanzi okungenangqiqo” kwaye iziphumo kwi 'Luxanduva kwaye alunakulinganiswa' isigaba sokufumanisa
Amanqanaba aphambili eRipple aBonwayo-Septemba 8
Kunye nayo yonke imakethi ye-crypto, i-XRP yafumana ukubethwa ngumbane izolo kwinqanaba le-0.9250, isusa phantse iiveki ezine zenzuzo. Ukonakala kwentengiso kubangelwe zizinto ezinxulumene neBitcoin kunye nesoyikiso somthetho we-SEC eCoinbase.
I-cryptocurrency ngoku ijongene nomsebenzi onzima wokubuyela umva ngaphezulu kwe- $ 1.3500 yendawo kungekudala. Ukuqina okungagungqiyo kwinqanaba langoku kungaphinda kuhlaziye iibhere, eziqhuba ixabiso ukuya kwindawo eyi- $ 0.9000. Ngexesha lokushicilela, iXRPUSD ithengisa nge- $ 1.0660, inyuke nge-15% ukusuka kwingozi yayo yamva nje.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.07 zezigidi
Uqoqosho lweRiple capitalisation: $ 50.6 billion
Ukulawula kweRipple: 2.45%
Ripple vs. SEC Ummeli-mthetho: Iifayile ezi-Ripple zokuBhengezwa kwe-SEC Staff Crypto Holdings
Ukuhlaziywa: 1 Septemba 2021
The Ripples Kutshanje iqela lifake isikhalazo sokunyanzela amalungu eKhomishini yoKhuseleko kunye neTshintshiselwano yaseMelika ukuba ichaze ukubanjwa kwabo kweXRP. Ukuba kuvunyiwe, isindululo siza kuveza amaxwebhu malunga nokuba abasebenzi be-SEC bavunyelwe na ukuba bathengise ngee-cryptocurrensets.
Isindululo esifakwe liqela lezomthetho lenkampani yezisombululo zentlawulo sikwacetyelwe ukufumanisa isigwebo seKhomishini kwi-XRP, Bitcoin, nase-Ethereum. Ngamagama alula, ijolise ekufumaneni idatha nakuwuphi na umgaqo-nkqubo othintela abasebenzi be-SEC ukuba bathengise ezi zinto zisebenza kakuhle.
Isindululo sivumela ukungeniswa kolwazi ngokungaziwayo, nokuba kukodwa okanye kwifomathi ehlanganisiweyo. Ngokutsho kokufundwa kokufayilwa, i-SEC yahluleka ukuphumeza nawuphi na umgaqo-nkqubo othintela abasebenzi bayo ekuthengiseni i-crypto kude kube nguJanuwari 2018. Ukufayilwa kuqaphele ukuba oku kulibaziseka bekuya kunika abasebenzi be-SEC iwindow yokutyala imali kwiXRP.
Ukuba impikiswano kaRipple iyasebenza, iKhomishini yayiya kumisela imigaqo engqongqo kwiRipple kunabasebenzi bayo. Ukugcwaliswa kucacisiwe ukuba:
"Le nto ijongela phantsi izityholo ze-SEC zokuba abaTyholwa ngaBanye babengenankathalo ngokungaphumeleli ukumisela kwangoko ngo-2013 ukuba izibonelelo kunye nentengiso yeXRP yayizezokhuseleko."
Amanqanaba aphambili eRipple aBonwayo-Septemba 1
I-XRP / i-USD ithumele ukubuyisela kabukhali izolo, kulandela i-rally ye-13%, eyabona incopho ye-cryptocurrency kwi-1.2435 yeedola. Nangona kunjalo, i-cryptocurrency yesithandathu ngobukhulu iwele umva ngezantsi komgca we- $ 1.2000 kwaye yachukumisa inkxaso ye- $ 1.1500, zonke ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
Oko kwathethi, iinkunzi zenkomo ziyaqhubeka ukuphinda zilibhale uphawu lwedola eyi-1.2000, kungabikho nto, kubonisa ukuba eli nqanaba linokukhuthaza i-rally ye-bullish ukuba yaphuke kwakamsinya. Ngokunikwa uluvo lwangoku kwimarike ebanzi, silindele ukuba ikhefu elizinzileyo lingaphezulu kokuxhathisa kwe- $ 1.2000 kwiiyure ezizayo. Eli khefu lokuqhubela phambili linokukhokelela kwiinkunzi ezilandelelanayo ezibalekayo ziye kwinqanaba le- $ 1.3500 kwaye mhlawumbi ngaphezulu.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 1.2000, $ 1.2700, kunye ne-1.3250, kwaye amanqanaba ethu enkxaso ayi- $ 1.1150, $ 1.1000, kunye ne- $ 1.0500.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.10 zezigidi
Uqoqosho lweRiple capitalisation: $ 56 billion
Ukulawula kweRipple: 2.65%
← Entsha izithuba 1 2 3 ... 6 abaDala izithuba →